» जानीराखौ के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ?
जानीराखौ के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ?
२३ बैशाख २०७६, सोमबार १७:३३
विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्न नसकिने भने होइन। मानिसमा कौतुहलता हुन्छ। ऊ नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ। यस क्रममा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौनकर्मीसँग हुनसक्छ।उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन अंगको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन। डर, त्रास, हतार, हतास तथा असुरक्षित वातावरणमा यौन सम्पर्क राख्नु पर्दा यौन सम्पर्क पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान जाँदैन।